के कारणले महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहन चाहन्छन् ? – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/के कारणले महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहन चाहन्छन् ?
के कारणले महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहन चाहन्छन् ?
विवाहपछि सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहपछि सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या विवाहपछि सम्बन्धमा रहन्छन् ।
४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका अध्ययन अनुसार यस्ता कारणहरु छन् :
पतिको स्वभावमा आएको परिवर्तन :
विवाहपछि पुरुषको काँधमा जिम्मेवारीको बोझ थपिन्छ । श्रीमती र छोराछोरीको जिम्मेवारी उठाउने क्रममा पुरुषहरु श्रीमतीलाई वेवास्ता गर्न पुग्छन् । जिम्मेवारी सँगसँगै रोमान्स र समय दुवैमा कमी आउँछ जसको कारण महिला दोसु्रो पुरुषसँग आर्कषित हुन्छन् ।
सानो उमेरमा विवाह :
सानै उमेरमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका महिलाहरु विवाहपछि उनीहरु अनेक सामाजिक बन्धनमा रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसका कारण उनीहरु जीवन अर्कै मोडमा आइपुगेको र आफ्नो जीन्दगीमा अमूल्य समय खेर गएको अनुभव गर्छन् । जसको कारण उनीहरु विवाहपछि सम्बन्धतर्फ उद्धत हुन्छन् ।
पुरुषप्रतिको आर्कषण :
यौन असन्तुष्टी :
बच्चा जन्मिएपछि :
घरायसी समस्या :
बेट्री क्षमता धेरै भएको इन्फिनिक्सको सस्तो स्मार्टफोन बजारमा